Ụbọchị My Pet » Ònye na-ekwu Ị Pụghị Mee ọsọ ọsọ Ịhụnanya?
emelitere ikpeazụ: Jan. 13 2021 | 2 min agụ
Nwere ike ị na ọku ire oku nke ịhụnanya na- 90 nkeji ma ọ bụ obere? Ndien ntak 90 nkeji na ọ bụghị 27 nkeji ma ọ bụ 6 awa? Ọ na-ada crazy na-emighị emi ma ọ bụ ka ọ na-? Mgbe m bipụtara mbụ m akwụkwọ, Olee otú ime ka ndị mmadụ dị ka gị na 90 Sekọnd ma ọ bụ Naa, ndị mmadụ chere na ọ bụ crazy na-emighị emi kwa, ruo mgbe ha mụtara na anyị n'ezie ikpebi ma ma ọ bụ anyị na-amasị ndị mmadụ abụọ mbụ sekọnd-ahụ ka ha. Mgbe oge 90 sekọnd agafeela, i nwere ike ịbụ nke ọma na ụzọ gị na-atụgharị a mbụ echiche n'ime a na-adịgide adịgide mmekọrịta, ọ ga-abụ ndị enyi, azụmahịa, ma ọ bụ romance. Ma ha bụ ndị maara nke ya ma ọ bụ, a na-akpọ mmadụ onyinye ndị ị maara, ndị nwere ike dị nnọọ na-eje ije n'ime juru otu ụlọ ndị bịara abịa ma malite a gbara ọkpụrụkpụ mkparịta ụka na onye ọ bụla zipụ n'ókè na ha na-ekwu okwu n'ụzọ na-eme ka ndị ọzọ ozugbo dị ka, ntụkwasị obi, na ahụ na-eru na ha. Ozugbo ị maara ihe ha na-eme na otú ha na-eme ya, ị nwere ike ịmepụta na ụdị mbụ echiche kwa.
Na enyi na azụmahịa, a dị oké ọnụ ahịa 90 sekọnd nwere ike gị na-a na-efe efe mmalite. Nyere nri ọnọdụ, na unu abụọ na-eziga ụfọdụ n'ókè na-ekwu okwu na a ụfọdụ ụzọ na nri oge, ọ pụkwara ịbụ a buteere n'anya, na-ewere gị mma njikọ chiri anya mkpebi. N'ihi na a pasent dị nta nke di na nwunye, ihe ndị a n'oge fọrọ nke nta instantaneously, na-eme ka ha na-ada na ịhụnanya na mbụ n'anya. Ọtụtụ di na nwunye intuitively chọpụta usoro ma na-fumble ụzọ ha site site nnwale tupu izu, ọnwa, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ọbụna na afọ mgbe e mesịrị ha mesịrị pịa. Ma usoro adịghị ga-abụ ya mere
protracted na ị na-adịghị ga-ahapụ ya ka ohere.
Iji dee akwụkwọ a, M na-amụ ikom na ndị inyom nile nke ụwa dị ka ha na ejikọrọ na ya mere ihe na nke mmetụta uche mmetụta na ibe. M nyochaa fọrọ nke nta abụọ na puku abụọ ihunanya mmekọrịta site na di na nwunye ndị Isaac ke akpa anya ndị bụ ndị enyi n'ihi na afọ tupu ha aghọọ inwe ịhụnanya mmekọahụ. M gwara di na nwunye ndị M u na ọnụ maka 50 afọ na afọ iri na ụma bụ ndị na M u na passionately ịhụnanya na ọnwa ole na ole. M gbara ajụjụ ọnụ n'oge gara aga ma na ugbu mmekọ nke otu ikom na ndị inyom na-achọpụta ihe ha nwetara na-ezighị ezi na oge mbụ, ihe ha mụtara n'aka ha ahụmahụ, na otú ha si na o ziri ezi na ọhụrụ ha mmekọ. M ọbụna gwara gigolos na anwụ na-acha ntụrụndụ nke ebe ndịda Europe ịmụta ha na nzuzo na-eme ozugbo njikọ ikom na ndị inyom, n'ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla, na-enweghị oge. M kwuru okwu ndị na-enwekwaghị mmekọ na ọrịa ma ọ bụ ihe mberede, na kweere na ha nwere ike mgbe n'anya ọzọ ruo mgbe ọnọdụ mere ọhụrụ ịhụnanya n'ime ndụ ha. M nyere nzukọ ọmụmụ na noo nwalee echiche n'akwụkwọ a, na dị ka a na ya pụta ọkọdọ kpọrọ agbamakwụkwọ. M maara na-arụ ọrụ na-emecha n'uko ma n'ụzọ anụ ahụ disadvantaged ndiife onye, ọrụ ebube nke ọrụ ebube, hụrụ adịgide adịgide romance karịrị ha wildest nrọ ọbụna mgbe ha nyere elu
olileanya na. Nke a na-ahiri mesikwuru ihe m mgbe nile na mara: E nwere onye ka onye ọ bụla na ha na-ahụ onye ọ bụla ọzọ mgbe ha na-ala na-atụ anya ya.
Iri Itoolu nkeji bụ dị ka ogologo oge ị ga-mkpa ka anya n'ụzọ miri emi n'ime onye ọzọ na-a siri ike mmetụta maka ihe na-eme ka ha tinye akà rà na-ekwe ka ha anya n'ụzọ miri emi n'ime unu ime otu ihe ahụ.